Cali Yare, Author at Ceelhuur Online - Page 2 of 99
Home > Cali Yare > Page 2
Kulankii Golaha Shacabka oo ugu Dambayn furmay
April 3, 2019 Cali Yare513
Golaha Shacabka ee Baarlamaan Soomaaliya, ayaa maanta leh, kullan koodii 3aad ee Kalfadhiga 5aad, kadib markii uu kooran la’aan u baaqday kullankii 1aad iyo 2aad ee Kalfadhigan. Kulanka ayaa warbixin looga dhagaysan doonaa guddiga dib u eegista Dastuurka Baarlamaan Soomaaliya. Sidoo kale Ajandaha fadhiga waxaa ku jira, hadal jeedinta Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka […]
Tiro ka tirsan Ciidanka Booliska Somalia oo Xabsi loo taxaabay
April 2, 2019 Cali Yare523
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ballaaran ee ka soconaya Magaalada Muqdisho,kuwaasoo lagula dagaallamaayo falal Amni darada ee ka dhaca Magaalada Muqdisho iyo musuq maasuqa. Zakiya Xuseen Axmed Taliye Ku Xigeenka ciidamadda Booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegtay in howlgallo ballaaran ay socdaan, islamarkaana la xiray 23 Askari oo ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed. […]
April 2, 2019 Cali Yare499
Xarunta Golaha Shacabka ayaa maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursi ka banaanaa Golaha Shacabka, kaas oo uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee Cismaan Cilmi Boqore oo koox ka tirsan Al-shabaab ku dileen Magaladda Muqdisho Doorashada ayaa waxaa ku tartamay Cadnaan Cismaan Cilmi Boqore oo uu dhalay Marxuum Cismaan Cilmi Boqore iyo Axmed Cismaan Xaashi, […]
March 31, 2019 Cali Yare528
March 27, 2019 Cali Yare533
March 27, 2019 Cali Yare587
March 27, 2019 Cali Yare676
Doorasho Maanta ka dhacaysa Gaalkacy
March 25, 2019 Cali Yare891
Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug waxaa ka socda diyaar garoowgii ugu dambeeyey ee doorashada Duqa degmadaas oo ay dooran doonaan Xubnaha Golaha deegaanka. Shalay oo Axad aheyd ayaa waxaa lagu dhawaaqay Xildhibaanada Golaha deegaanka Gaalkacyo oo ka kooban 31 xubnood, waxaana ku jira xubno cusub oo aan ka mid aheyn Xildhibaanadii hore ee Golaha […]
Howlgalo Dad lagu soo qab qabtay oo ka dhacay Muqdisho
March 25, 2019 Cali Yare583
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya waxaa ay xalay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Warta-nabada ee Gobolkan Banaadir, waxaana howlgalkaas lagu qabqabtay dad u badan dhalinyaro. Ciidamada ayaa howlgalka sigaar ah waxa ay uga sameeyeen Laanta Barwaaqo ilaa laanta 3aad ee degmada Warta-Nabada, waxaana inta uu howlgalka socday lagu qabqabtay boqolaal dhalinyaro ka […]
March 25, 2019 March 25, 2019 Cali Yare634
Allaha u naxariisto Mohamed Jeylaani oo ka tirsanaa Shaqaalaha Jaamacadda SIMAD, ayaa ku geeriyooday qarax lagu xiray gaari ay laheyd Jaamacadda SIMAD oo ka dhacay Xaafadda NBC ee Degmada Hodan. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad kale oo gaariga saarnaa iyo qaar wadada marayey. Gaariga qarxay ayaa ah nuuca Toyota Hilux, Qaraxyada Muqdisho ayaa kordhay […]